12 Ndị a bụ ndị bịakwutere Devid n’ime Ziklag+ mgbe ọ na-enweghị ike ịgagharị otú o si masị ya n’ihi Sọl+ nwa Kish; ha sokwa ná ndị dike ya,+ ndị na-enyere ya aka n’ibu agha, 2 ha na-eji ụta, ha na-eji ma aka nri ma aka ekpe+ agbapụ nkume+ ma ọ bụ agbapụ akụ́+ n’ụta ha.+ Ha bụ ụmụnne Sọl, ndị ebo Benjamin. 3 Onyeisi ha bụ Ahayiza, tinyere Joash, bụ́ ụmụ Shemea onye Gibia,+ nakwa Jiziel na Pelet bụ́ ụmụ Azmavet,+ nakwa Beraka na Jihu bụ́ ndị Anatọt,+ 4 nakwa Ishmeya onye Gibiọn,+ onye bụ́ dike n’etiti mmadụ iri atọ ahụ,+ bụrụkwa onyeisi mmadụ iri atọ ahụ; nakwa Jeremaya na Jahazayel na Johenan na Jozabad bụ́ onye Gedira,+ 5 Eluzaị na Jerimọt na Bealaya na Shemaraya na Shefataya bụ́ onye Harif, 6 Elkena na Ịs-shaya na Azarel na Joiza na Jashobiam bụ́ ndị si n’agbụrụ Kora,+ 7 na Joila na Zebadaya bụ́ ụmụ Jeroham onye Gidọ. 8 E nwekwara ụfọdụ n’ime ndị Gad bụ́ ndị kewapụrụ onwe ha wee gakwuru Devid n’ebe siri ike mbanye nke dị n’ala ịkpa,+ ha bụ ndị dimkpa bụ́ dike, ndị na-aga agha, ndị na-akwadebe ọta ukwu na ube,+ ndị ihu ha bụ ihu ọdụm,+ ha na-awụ ọsọ n’ugwu dị ka nne mgbada.+ 9 Iza bụ onyeisi ha, Obedaya bụ onye nke abụọ, Elayab bụ onye nke atọ, 10 Mishmana bụ onye nke anọ, Jeremaya bụ onye nke ise, 11 Ataị bụ onye nke isii, Iliel bụ onye nke asaa, 12 Johenan bụ onye nke asatọ, Elzebad bụ onye nke itoolu, 13 Jeremaya bụ onye nke iri, Makbanaị bụ onye nke iri na otu. 14 Ndị a si n’ebo Gad,+ bụ́ ndị isi ndị agha. Onye kasị nta n’ime ha hà ka otu narị mmadụ n’ịdị ike, onye kasị ukwuu hakwa ka otu puku mmadụ n’ịdị ike.+ 15 Ọ bụ ndị a gafere Jọdan+ n’ọnwa mbụ mgbe o tochiri akụkụ ya niile,+ ha wee chụpụ ndị niile bi na ndagwurugwu, ma n’ebe ọwụwa anyanwụ ma n’ebe ọdịda anyanwụ. 16 Ụfọdụ n’ime ụmụ Benjamin na Juda wee bịaruo ebe ahụ siri ike mbanye,+ bịakwute Devid. 17 Devid wee pụta n’ihu ha wee sị ha: “Ọ bụrụ na ọ bụ maka udo+ ka unu ji bịakwute m ka unu nyere m aka, obi mụ na unu ga-abụ otu.+ Ma ọ bụrụ na ọ bụ ka unu rara m nye n’aka ndị iro m mgbe ọbụ aka m dị ọcha,+ ka Chineke+ nna nna anyị hà hụ maka ya ma dozie okwu.”+ 18 Mmụọ nsọ+ wee kpuchie Amesaị, bụ́ onyeisi mmadụ iri atọ ahụ, o wee, sị: “Anyị bụ nke gị, Devid, anyị nọnyeere gị,+ nwa Jesi. Udo, udo dịrị gị, udo dịkwara onye na-enyere gị aka, N’ihi na Chineke gị enyeworo gị aka.”+ Devid wee nabata ha wee mee ka ha soro ná ndị isi ndị agha ya.+ 19 E nwekwara ụfọdụ n’ime ụmụ Manase bụ́ ndị gbakwuuru Devid mgbe ya na ndị Filistia bịara+ ibuso Sọl agha; ma o nyeghịrị ha aka, n’ihi na mgbe ndị isi+ ndị Filistia gbasịrị izu, ha gwara ya ka ọ lawa, sị: “Ọ ga-agbakwuru onyenwe ya Sọl bụ́ nke ga-eri isi anyị.”+ 20 Mgbe ọ bịara na Ziklag,+ Adna na Jozabad na Jedayel na Maịkel na Jozabad na Elaịhu na Ziletaị, bụ́ ndị isi nke otu puku otu puku ndị agha+ bụ́ ndị Manase, si na Manase gbakwuru ya. 21 Ha nyeere Devid aka ịlụso ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga+ ọgụ, n’ihi na ha niile bụ ndị dike+ obi siri ike, ha wee bụrụ ndị isi n’etiti ndị agha ya; 22 n’ihi na ndị mmadụ na-abịakwute+ Devid kwa ụbọchị inyere ya aka, ruo mgbe ha ghọrọ ụsụụ ndị agha dị ukwuu,+ dị ka ụsụụ ndị agha nke Chineke.+ 23 Ndị a bụ ọnụ ọgụgụ ndị isi nke ndị a kwadebere maka agha bụ́ ndị bịakwutere Devid n’ime Hibrọn+ iji nyefee ya alaeze+ Sọl dị ka iwu Jehova si dị.+ 24 Ụmụ Juda ndị na-ebu ọta ukwu na ube dị puku mmadụ isii na narị asatọ, ndị a kwadebere maka agha. 25 N’ime ụmụ Simiọn, ndị dike obi siri ike, bụ́ ndị so ná ndị agha dị puku mmadụ asaa na otu narị. 26 N’ime ụmụ Livaị, e nwere puku mmadụ anọ na narị isii. 27 Jehoyada bụ onye ndú+ ụmụ Erọn,+ puku mmadụ atọ na narị asaa sokwa ya. 28 E nwekwara Zedọk,+ nwa okorobịa bụ́ dike obi siri ike, na ụlọ ndị nna nna ya, bụ́ ndị isi iri abụọ na abụọ. 29 N’ime ụmụ Benjamin,+ bụ́ ụmụnne Sọl,+ e nwere puku mmadụ atọ. Ruo mgbe ahụ, ihe ka ọtụtụ n’ime ha nọ na-echesi ụlọ Sọl nche ike. 30 N’ime ụmụ Ifrem, e nwere puku mmadụ iri abụọ na narị asatọ, bụ́ ndị dike+ obi siri ike, ndị a ma ama, dị ka ụlọ ndị nna nna ha si dị. 31 N’ime ọkara ebo Manase,+ e nwere puku mmadụ iri na asatọ a kpọrọ aha maka ịbịa mee Devid eze. 32 N’ime ụmụ Ịsaka,+ bụ́ ndị maara ihe oge nyere,+ iji mata ihe Izrel kwesịrị ime,+ e nwere narị ndị isi abụọ, ụmụnne ha niile na-erubere ha isi. 33 N’ime ụmụ Zebulọn,+ e nwere puku mmadụ iri ise, bụ́ ndị na-aga agha, ndị na-ebu ụdị ngwá agha niile aga agha, ha ejighịkwa obi abụọ na-agakwuru Devid. 34 N’ime ụmụ Naftalaị,+ e nwere otu puku ndị isi, ha nwekwara puku mmadụ iri atọ na asaa ndị na-ebu ọta ukwu na ube. 35 N’ime ụmụ Dan, ndị na-aga agha dị puku mmadụ iri abụọ na asatọ na narị isii. 36 N’ime ụmụ Asha,+ ndị na-aga agha dị puku mmadụ iri anọ. 37 Ndị si n’ofe Jọdan+ n’etiti ụmụ Ruben na ụmụ Gad na ọkara ebo Manase, bụ́ ndị bu ngwá agha niile nke ndị agha, dị otu narị puku mmadụ na puku iri abụọ. 38 Ndị a niile bụ ndị agha, ndị na-aga agha; ha ji obi zuru ezu+ bịa na Hibrọn ka ha mee Devid eze Izrel dum; ndị niile fọdụrụ n’Izrel jikwa otu obi chọọ ka e mee Devid eze.+ 39 Ha na Devid wee nọrọ n’ebe ahụ ruo ụbọchị atọ, na-eri ihe, na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ,+ n’ihi na ụmụnne ha mere nkwadebe maka ha. 40 Ndị bi ha nso, ruo Ịsaka+ na Zebulọn+ na Naftalaị,+ jikwa ịnyịnya ibu+ na kamel na jakị na ehi na-ebute ihe oriri ndị e ji ntụ ọka* mee,+ mbadamba achịcha mkpụrụ fig+ na achịcha mkpụrụ vaịn a mịrị amị+ na mmanya+ na mmanụ+ na ehi+ na atụrụ,+ n’ụba, n’ihi na a na-aṅụrị ọṅụ+ n’Izrel.